Faah faahin: Taliyaha Ilaalada Garoonka Degmada Baardheere oo ku dhaawacmay Qarax lagu weeraray - Get Latest News From Horn of Africa
Faah faahin: Taliyaha Ilaalada Garoonka Degmada Baardheere oo ku dhaawacmay Qarax lagu weeraray
By On Jun 23, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Wararka ka imaanaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in Qarax nuuca dhulka lagu aaso ee miinada loo yaqaan lagu qarxiyay Taliyaha ilaalada Garoonka Baardheere.
Taliyaha Ilaalada Garoonka Baardheere Cabdi Yaasiin (Qalab) iyo saddex ka mid ahayd ilaaladiisa, ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, ka dib markii lagula beegsaday hoy ku yaala xaafadda Buulo Kuulow.
Warar is khilaafsan, ayaa ka soo baxaya nooca uu qaraxaasi ahaa. Wararka qaar waxay sheegayan in qaraxaasi uu ka dhashay bambo gacmeed lagu tuuray hoyga, halka warar kalana ay sheegayan in uu ka dhashay miino horey loogu dhex aasay hoygaasi.
Taliye Qalab, ayaa waxaa la soo sheegaya in xaaladiisa ay tahay mid garaab ah, waxaana mar soo baxay warar sheegaya in uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxaasi, inkastoo la beeniyay.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Xoogga Dalka ee ku sugan Degmada Baardheere, ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in Taliye Qalab ay xaaladiisu tahay mid aad u liidata, isla-markaana uu koomo ku jiro.
Sidoo kale laba ka mid ah ilaaladiisii, ayaa waxaa la xaqiijiyay in dhaawacyadoodu ay daran yihiin, waxaana xilligan lagu dabiibaya Isbitaalka Ciidanka Amisom ku leeyihiin Baardheere.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee ku sugan degmadaasi, ayaa waxay qaraxaasi ku eedeeyen Ururka Al Shabaab, oo xilliyada qaarkood qaraxyo iyo dilalba ka gaysta degmada.
22-kii bishii July ee sanadkii 2015-ka, ayay ahayd markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Midowga Afrika, ay si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta Degmadaasi Baardheere, ka dib sanado badan oo Shabaabku ay ka arriminayen.